श्रीलंकाका चर्चित फास्ट बलर मालिंगाले टी-२० क्रिकेटमा बनाए नया कीर्तिमान - Nepal Bizz
कोलम्बो : श्रीलंकाका चर्चित फास्ट बलर लासिथ मालिंगाले टी–२० क्रिकेटमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । आइतबार न्युजिल्याण्डविरुद्ध टी–२० सिरिजको पहिलो खेलका क्रममा मालिंगा टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी बन्न सफल भएका छन् ।
श्रीलंकामा भएको आइतबारको खेलमा मालिंगाले २ विकेट लिँदै पाकिस्तानका शाहिद अफ्रिदीको कीर्तिमानलाई पछि पारेका हुन् । मालिंगाले ७४ इनिङमा बलिङ गरी ९९ विकेट लिएका छन् । अफ्रिदीले ९९ इनिङमा बलिङ गरी ९८ विकेट लिएका थिए ।
टी–२० सिरिजको पहिलो खेलमा भने श्रीलंका ५ विकेटले पराजित भएको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १७४ रन बनाएको थियो । श्रीलंकाका लागि कुशल मेन्डिसले सर्वाधिक ७९ रनको योगदान गरेका थिए। १७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्याण्डले १९.३ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर जित हात पार्‍यो । न्युजिल्याण्डका लागि रोस टेलरले सर्वाधिक ४८ र कोलिन डी ग्राण्डहोम ४४ रनको योगदान गरे।
कप्तानसमेत रहेका मालिंगाले पहिलो ओभरको चौथो बलमा ओपनर कोलिन मुन्रोलाई बोल्ड आउट गर्दै अफ्रदीसँगको कीर्तिमान बराबरी गरे। उनले १४औं ओभरको तेस्रो बलमा कोलिन डी ग्राण्डहोमलाई बोल्ड आउट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेटमा सर्वाधिक विकेट लिने कीर्तिमान आफ्नो नाममा दर्ज गराए । मालिंगा र अफ्रदीपछि सर्वाधिक विकेट लिनेमा बंगलादेशका सकिब अल हसन छन् । उनले ७२ इनिङमा ८८ विकेट लिएका छन् । मालिंगाले एक महिना अघि मात्रै एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए।
Posted on ३२ श्रावण २०७६, शनिबार २०:०० Author admin
काठमाडौँ – तपाईंको घरमा बगैंचा छ ? बगैंचामा फूलहरु फुलाउनु भएको छ, वनस्पति हुर्काउनुभएको छ ? करेसाबारी बनाउनुभएको छ ? सागसब्जी रोप्नुभएको छ ? बार्दली, छतमा फूल वा तरकारी फलाउनु/फुलाउनुभएको छ ? वास्तवमा यी कुराहरु तपाईंका स्वास्थ्य, सक्रियता र खुसीसँग जोडिएका छन् । तपाईंले आफ्नो घरको आसपासमा, छतमा, वार्दलीमा फूलहरु फुलाउन सक्नुहुन्छ । सागसब्जी रोप्न […]
नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना बैंकको एटीएम ह्याकमा ‘भाइरस’ प्रयोग गरेको खुलासा